China Quick ခြောက်သွေ့သော Jacquard Mesh 84% Nylon 16% Spandex ရှပ်အင်္ကျီ၊ အားကစားအ ၀ တ်အထည်များထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူအတွက် | Wenchang
လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့သော Jacquard Mesh 84% နိုင်လွန် ၁၆% Spandex ရှပ်အင်္ကျီ၊ အားကစားအ ၀ တ်အထည်များအတွက်ဇာထိုးထည်
MOQ စိတ်ကြိုက်ချုပ်ထားသော Polyeste ...
လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့သော Jacquard ကွက် ...
Eco-Friendly Grs လက်မှတ်ရ ...
RPET ချွေး ၈၇% polyamide ၁၃% ...
Lycra အထည်အလိပ်ရက်ထိုးကာ ...
ပျော့ပျောင်းသောပြန်လည်အသုံးပြု Polyester RPE ...
အရည်အသွေးမြင့်ရေစိုခံ 100 ...
Spandex Jacquard ကြိုးထိုးထိုးမင်္ဂလာပါ ...
ပစ္စည်း： 86% နိုင်လွန် 14% Spandex
ဝိသေသလက္ခဏာများ： ချွေး / လျင်မြန်သောခြောက်သွေ့ခြင်း / သက်သောင့်သက်သာ / ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အထည် / မြင့်မားသော elasticity / အရောင်မြင့်မှု / Custom ပုံစံ / အခမဲ့နမူနာ
FOB စျေးနှုန်း: အမေရိကန်အထူးသဖြင့်အခြေအနေ / ကိုက်အရသိရသည်
ငွေပေးချေမှု L / မှန် CT / T ကအနောက် & ပြည်ထောင်စု
Supply နိုင်ခြင်း: တစ်နေ့လျှင် 50000 Piece / အပိုင်းပိုင်း
စျေး အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဥရောပ
အနည်းဆုံးအမှာစာ: အရေအတွက် 1KG စမ်းသပ်မိန့်
ပစ္စည်း 86% နိုင်လွန် 14% Spandex
အသွင်အပြင် လျင်မြန်သောခြောက်သွေ့ / လေ ၀ င်လေထွက် / ရေစိုခံ / ခရမ်းလွန်ဆန့်ကျင်သည်
အသုံးပြုပါ အဝတ်၊ အားကစား၊ တီရှပ်၊ တောင်တက် / အဝတ်အစား
စျေးကွက် ယူအက်စ်အေ / ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ယူကေ၊ ဂျာမနီ
လက်မှတ် RSG / SGS / Oeko-tex
မူလနေရာ တရုတ် (ပြည်မ)
ငွေပေးချေမှု L / မှန် CT / T က
Patter / စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပုံနှိပ်ပါ သူတော်ကောင်းတရားဒီဇိုင်းအဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားပုံနှိပ် & ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အားသာချက်များ ရရှိနိုင်သောအခမဲ့နမူနာ။
စိတ်ကြိုက်ပုံစံ, အကျယ်, အလေးချိန်။
အားကောင်းသော R & D နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအမျှင်အသစ်များသည်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အန္တရာယ်ကြီးမားသောပုလင်းများမှပြုလုပ်သည်
၀ ယ်ယူသုံးစွဲသူများနှင့်စားသုံးသူများအားသမုဒ္ဒရာပလတ်စတစ်၏ပြsolvingနာကိုဖြေရှင်းရာတွင်ရေရှည်တည်တံ့သောပြန်လည်အသုံးပြုထားသောဖိုင်ဘာဖြစ်သည့်REPREVE®ကိုထုတ်လုပ်သည့် Unifi သည် Inc. သမုဒ္ဒရာပလတ်စတစ်၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်REPREVE®ကျွန်ုပ်တို့၏Ocean®အမျှင်သည်ပုံမှန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်အသုံးပြုစနစ်များမရှိသောနိုင်ငံများသို့မဟုတ်ဒေသများရှိကမ်းရိုးတန်းကီလိုမီတာ ၅၀ အတွင်းစုဆောင်းထားသောပုလင်းများမှပြုလုပ်သည်။
“ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်အန္တရာယ်များသောပုလင်းများမှရရှိသောအမျှင်များနှင့်ဗဓေလသစ်များစုဆောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမုဒ္ဒရာတွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ” ဟု Unifi အတွက်ကမ္ဘာ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အရောင်းဌာနအကြီးတန်းဒုဥက္ကPresident္ဌဂျေးဟတ်တီကပြောကြားသည်။ ဘီလီယံနှင့်ချီသောပလပ်စတစ်ပုလင်းများကို REPREVE recycled fiber အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လေ၊ မြေနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုကြာမြင့်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ REPREVE ကျွန်ုပ်တို့၏သမုဒ္ဒရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သမုဒ္ဒရာကို ဦး တည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြရန်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ ”
နှစ်စဉ်တန်ချိန် ၈.၈ သန်းတန်ပလတ်စတစ်များသည်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ဝင်ရောက်လာသည်၊ ၎င်းသည်အမှိုက်သရိုက်ကုန်တင်ကားတစ်စီး၏အကြောင်းအရာများကိုတစ်မိနစ်လျှင်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ ထို့အပြင်အနည်းဆုံး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းပလပ်စတစ်သည်ကုန်းတွင်းရှိသမုဒ္ဒရာများသို့စီးဝင်လာပြီးလက်ရှိနှုန်းထားများအရ ၂၀၅၀ တွင်ငါးများထက်ပလတ်စတစ်ပိုများသည်။
သမုဒ္ဒရာလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြေရှင်းရန်ပိုမိုခိုင်မာသည့်ရပ်တည်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်ပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြလိုသောရှေ့ပြေးအတွေးအမြင်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ယခုတွင်အသစ်သောရွေးချယ်မှုရှိသည်။ “ ကျွန်ုပ်တို့၏သမုဒ္ဒရာကိုမနက်ဖြန်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ၊ ဒီပရီမီယံထုတ်ကုန်သည်လာမယ့်မျိုးဆက်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ချင်သောသုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ”
ယောဂအထည်များထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရေကူး ၀ တ်စုံများ၊ ကမ်းခြေဘောင်းဘီများ၊ အားကစားဝတ်ဆင်မှုများ၊ အ ၀ တ်အစားများ၊ နှင်းလျှောစီးအဝတ်အစားများ၊ တောင်တက်ဝတ်ဆင်မှုများလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆွေးနွေးရန်ကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၉၅ မှ စတင်၍ ပြည်တွင်းစျေးကွက် (၆၀.၀၀%)၊ မြောက်အမေရိက (၁၀.၀%)၊ အရှေ့တောင်ဘက်သို့ရောင်းချသည်။
အာရှ (10.00%)၊ အာဖရိက (10.00%), တောင်အာရှ (5.00%), တောင်အမေရိက (3.00%), တောင်ပိုင်းဥရောပ (2.00%) ။ လူ ဦး ရေစုစုပေါင်း ၅၁-၁၀၀ ခန့်ရှိသည်
၄။ အခြားသွင်းသူများထံမှမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ထံမှအဘယ်ကြောင့် ၀ ယ်သင့်သနည်း။
1. အဓိကထုတ်ကုန်များ - ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အထည်များ၊ ရေကူး ၀ တ်စုံများ၊ အားကစားအ ၀ တ်အထည်များ ၂။ Oeko-tex စံအောင်လက်မှတ်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ 3. အရောင်
အစာရှောင်ခြင်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာကို AATCC မှ ၃ တန်းအထိ ၄ အထိတက်နိုင်သည်
လက်ခံသောပို့ဆောင်ရေးသတ်မှတ်ချက်များ - FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP၊ အမြန်ပေးပို့ခြင်း၊ DAF；
လက်ခံသောငွေပေးချေမှုငွေကြေး - USD၊ EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
လက်ခံသောငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား: T / T, L / C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash;
ဘာသာစကားများကိုပြောဆိုသည်၊ ဘာသာစကား: အင်္ဂလိပ်, တရုတ်, ဂျပန်, ပေါ်တူဂီ!
ရှေ့သို့ Eco-Friendly Grs အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံထိုးပြီးပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အထည်များ၊ အမျိုးသားများ Bird Eye Mesh ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပလပ်စတစ် Polyester အထည်အားကစားအတွက်
နောက်တစ်ခု: သက်တောင့်သက်သာအတွက် MOQ စိတ်ကြိုက်ချုပ်ထားသော Polyester Spandex ဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်လီဗာပူးလ်ကျည်ဆန်ပုံနှိပ်ခြင်း